WHYY ProTrack မှ Returns - NAB Show ကိုသတင်းထုတ်လွှင့်ဘိ, NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြင့် - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်
Home » သတင်း » WHYY ProTrack ကိုပြန်လည်အကူအညီပေးမည်
WHYY ProTrack ကိုပြန်လည်အကူအညီပေးမည်
Northampton, MA ဧပြီလ 29, 2014 - Myers, ထုတ်လွှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုဆော့ဖ်ဝဲကိုတစ်ဦးလေးစားပြုစုသူ, WHYY သည်၎င်း၏ရုပ်မြင်သံကြားထုတ်လွှင့်လုပ်ငန်းများစီမံခန့်ခွဲဖို့ Myers ProTrack အသံလွှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ပြန်လာမည်ဖြစ်ကြောင်းကြေညာဖို့ကျေနပ်သည်။ WHYY နီးပါး 60 နှစ်ပေါင်းအရှေ့တောင် Pennsylvania ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနယူးဂျာစီပြည်နယ်နှင့်ဝဲအပေါငျးတို့သ်ထမ်းဆောင်, Philadelphia တွင်ထိပ်တန်းအများပြည်သူမီဒီယာပံ့ပိုးပေးသည်။ WHYY ရဲ့ဆုရန်ထမ်းသုံးပြည်နယ်ဒေသမှအဓိပ္ပာယ်ပြည့်နှင့်သက်ဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများပေး, အွန်လိုင်းရုပ်မြင်သံကြား, ရေဒီယိုနှင့်အပါအဝင်အားလုံးဒေသများအတွက်မြင့်မားတဲ့ဘားသတ်မှတ်ထားဖို့ရောက်နေပါတယ်။ WHYY Myers ထိရောက်သောနှင့်ကုန်ကျစရိတ်-အကျိုးရှိစွာထုံးစံ၌၎င်း၏လက်ရှိနှင့်အနာဂတ်အကြောင်းအရာဖြန့်ဖြူး Workflows စီမံခန့်ခွဲနိုင်ပါလိမ့်မယ်လို့ သိ. ProTrack reacquire ဖို့ရွေးချယ်ခဲ့တယ်။
တစ်ပြိုင်နက်တည်းသူတို့ရဲ့ Multichannel အချိန်ဇယားဆွဲ, အရောင်းနှင့်လူကုန်ကူးမှုတာဝန်များကိုတိုးမြှင့်နေချိန်တွင် ProTrack Cross-ဌာန Workflows စုစည်းဖို့လိုအပ်မီဒီယာစီမံခန့်ခွဲမှုအခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့်အတူ WHYY ပေးပါလိမ့်မယ်။ အထောက်အပံ့ကိုပေးပြီးထိုကဲ့သို့သောဝဘ်အချိန်ဇယားကို plug-in ကိုတစ်ခုနှင့်အလိုအလျောက် cloud-based data တွေကို backup လုပ်ထားအဖြစ်ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်ဝန်ဆောင်မှု restore လည်းထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိသည်။ ထို့အပြင် ProTrack ရဲ့အဆင့်မြင့်စနစ်များကိုပေါင်းစပ်စွမ်းရည် Centralcast LLC, တိုင်းပြည်တစ်ဝှမ်းတူသောမီဒီယာအဆောက်အဦတွေနဲ့သူတို့ရဲ့ content တွေကိုဝယ်ယူ, ဖြန့်ဖြူးခြင်း, သိုလှောင်မှုစုရုံးရန်ဆိုင်းရာကူစ်း, New York မှာတည်ရှိပါတယ်ပူးတွဲမာစတာထိန်းချုပ်ရေးစက်ရုံနှင့်အတူချောမွေ့စွာဖက်ဖို့ WHYY enable ပါလိမ့်မယ်။ ယေဘုယျအား Myers နှင့် Centralcast LLC နှင့်အတူလက်တွဲ WHYY မှသိသိသာသာတစ်နှစ်-over-တစ်နှစ်ကုန်ကျစရိတ်ငွေစုကိုကိုယ်စားပြုသည်။
" ... စသည်တို့ပရိုဂရမ်စီမံခန့်ခွဲမှုမှတဆင့်, အရောင်းရန်, ဝယ်ယူမှုအနေဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုအပေါင်းတို့၏ဘဝမှတ်တိုင်သံသရာစက်ဝိုင်းကိုခြေရာခံနိုင်စွမ်းရှိခြင်းအပြုသဘောရှေ့ဆက်ရွေ့လျားကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်လက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးထွား impact လိမ့်မည်ဟုကျွန်တော်တို့ရဲ့စစ်ဆင်ရေးသို့ယုံကြည်စိတ်ချရနှင့် function တစ်ခုကွီးကယျြတဲ့အဆင့်ကို infuses" ဘီလ်ကဆိုသည် Weber, VP & CTO, WHYY ။ "ကျနော်တို့ Myers '' အဖွဲ့ကထောက်ပံ့ပေးသော metadata ကိုစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်စနစ်များပေါင်းစည်းမှုကျွမ်းကျင်မှုတန်ဖိုးထားကျနော်တို့အနာဂတ်သို့သူတို့ကိုငါနှင့်အတူတစ်ဦးအပြန်အလှန်အောင်မြင်သောမိတ်ဖက်ဖို့မျှော်လင့်နေပါတယ်။ "
"ကျနော်တို့ကလုံးဝနောက်တဖန် WHYY supporting ခံရဖို့စိတ်လှုပ်ရှားနေကြသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စဉ်ဆက်မပြတ်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းနှင့်ဝန်ဆောင်မှု Evolution validates အဖြစ်ပြန်လာ client ကိုထက်မပိုကောင်းသောအနိုင်ရရှိပါသည်။ ကြှနျုပျတို့သညျသူတို့အမွေမှုစနစ်ကနေဒေတာတွေကိုရွှေ့ပြောင်းဖြည့်စွက်ပြီးတာနဲ့ WHYY ချက်ချင်း ProTrack ရဲ့အဆင့်မြင့် workflow နှင့်စနစ်များကိုပေါင်းစပ်စွမ်းရည်မှအကျိုးလိမ့်မည်။ "Crist Myers, CEO နဲ့သမ္မတ commented ။ "ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ client များအတွက်ထိရောက်မှုနောက်ဆုံးမှာအောက်ခြေလိုင်းတိုးတက်အောင်အကြောင်းကိုအားလုံးင်ကျနော်တို့အတိအကျကြောင်း WHYY များအတွက်လုပ်နေတာမျှော်လင့်နေတဲ့!"
Myers အလည်အပတ်ခရီးအကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန် www.myersinfosys.com.
WHYY နီးပါး 60 နှစ်ပေါင်းအရှေ့တောင် Pennsylvania ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနယူးဂျာစီပြည်နယ်နှင့်ဝဲအပေါငျးတို့သ်ထမ်းဆောင်, သာ. ကြီးမြတ် Philadelphia တွင်ထိပ်တန်းအများပြည်သူမီဒီယာပံ့ပိုးပေးသည်။ သင်ကလိုအပ်သည့်အခါသူကတီဗီ, ရေဒီယို, Web ပေါ်မှာနှင့်ရပ်ရွာထဲတွင်ရေတွက်သည့်အခါသင်ကနှင့်ပညာရေးလိုတဲ့အခါ WHYY, ဖျော်ဖြေရေးသတင်းပေးပါသည်။
CENTRALCAST LLC အကြောင်း
အဆိုပါပူးတွဲမာစတာ Control Center ကို WCNY-TV ကို / FM ရေသစ်ကိုထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်ဆိုင်းရာကူစ်း, နယူးယော့အတွက်ပညာရေးစင်တာ၌သျောလိမ့်မည်။ WCNY မှထို့အပြင် centralcast ပလေးအောက်စက်ရုံ WMHT (အယ်လ်ဘာနီ), WNED (Buffalo), WCFE (Plattsburgh), WPBS (Watertown), WSKG (Binghamton), WXXI (Rochester), နှင့် WNET (နယူးယောက်စီးတီး) အတွက်အကြောင်းအရာကိုစီမံခန့်ခွဲပါလိမ့်မယ် အရာအစီအစဉ်များ WLIW, NJTV (နယူးဂျာစီပြည်နယ်ပြည်သူ့ရုပ်မြင်သံကြား), WTVI (Charlotte, မြောက်ကယ်ရိုလိုင်းနား), နှင့် V-ငါ့ကို, စပိနျအတွက် PBS သားသမီးရဲ့ပရိုဂရမ်းမင်း။
1982 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး, Myers လျှင်မြန်စွာဖြစ်ပေါ်နေသောမီဒီယာရှုခင်းနှင့်အတူအရှိန်အဟုန်စောင့်ရှောက်ကြောင်းထုတ်လွှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုဆော့ဖ်ဝဲကိုဖွံ့ဖြိုးဆဲအတွက်ရှေ့ဆောင်တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကျယ်ပြန့်ဒိုမိန်းအသိပညာနှင့်စနစ်များပေါင်းစည်းမှုကျွမ်းကျင်မှုမျိုးစုံဌာနများနှင့်စနစ်များကိုဖြတ်ပြီးဖြန့်ဖြူး Workflows မောင်းပေးတဲ့ဆော့ဗ်ဝဲထုတ်ကုန်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုတစ် suite ကိုဖနျတီးဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုဦးဆောင်လျက်ရှိသည်။ ကျနော်တို့ကြီးမားတဲ့သို့မဟုတ်သေးငယ်တဲ့မီဒီယာအဆောက်အဦ, လုပ်ငန်းလည်ပတ်ထိရောက်မှုနှင့်အမြတ်အစွန်းပိုမိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေတဲ့သက်သေများနှင့်အရွယ်မှာထုတ်လွှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုဖြေရှင်းချက်ပူဇော်နိုင်ဖြစ်ခြင်းအတွက်မာနထောင်လွှားယူပါ။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက, သွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး: www.myersinfosys.com.
Deanna ကနေဒီ | စဲလ်လီဗို, LLC
matrix နှင့် WideOrbit နယူး API ကို Integrated နှင့်အတူမီဒီယာကုမ္ပဏီများအဘို့အ CRM ဒေတာများကို Flow အလိုအလျောက်ဖို့မိတ်ဖက် Extend - စက်တင်ဘာလ 25, 2019
matrix နှင့် vCreative နယူးပေါင်းစည်းရေးနှင့်အတူလုပ်ငန်းအသွားအလာစှမျး Extend - စက်တင်ဘာလ 24, 2019
အာဒံကို Gotlieb CTO အဖြစ် Matrix ပါတီဝင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် - သြဂုတ်လ 7, 2019
အသံလွှင်း Centralcast အကြောင်းအရာ Crist Myers Myers ProTrack WHYY	2014-04-30
ယခင်: ဂတ်စ် PBS အဆင့်မြှင့်မှုများ Volicon Observer တပ်ဆင်ခြင်း
နောက်တစ်ခု: ဒီဇိုင်နာ / အန်နီ Erik Edmondson Filmworkers Nashville ပါတီဝင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်